यस्ता छन् अरुको मन सहजै जित्न गर्नु पर्ने पाँच काम - Khabar Break | Khabar Break
एक व्यक्ति अर्काे व्यक्तिको मनमा बस्नु हरेकका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । यसरी मानिसको मन मष्तिकसम्म छाप छोड्न ठूलो लगानी वा वर्षाै मेहनत गरेर पनि सम्भव हुँदैन ।
कुनै सानो पलको भेट तथा व्यवहार पनि कोही कसैलाई अरुको मनमा बस्ने बाटो बनिदिन सक्छ ।
हामी केही टिप्सहरु दिदैछौँ, जसले तपाईंलाई अरु मानिसको मन जित्न मद्दत गर्छ ।
१. बोली तथा व्यवहार
हरेक मानिसलाई राम्रो बोली र व्यवहार नै प्यारो लाग्छ । धेरै झर्काेफर्काे नगर्ने, मीठो र नम्र बोल्ने तथा अरुलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने बानीले हरेक मानिसले नै अरुको मन जित्न सक्दछन् । त्यसैले अरुका अगाडि तपाईंको बोलीचाली र व्यवहार कस्तो छ, त्यसले नै तपाईंप्रति मानिसको धारणा बन्ने गर्दछ ।
२. आर्कषक देखिने
हरेक मानिस राम्रो पहिरन र आर्कषक मानिसबाट प्रभावित बन्ने गर्दछन् । आर्कषक मानिसले सहजै अरुको मन जित्न सक्दछन् । यसरी आर्कषक बन्न आफ्नो छालासँग सुहाउँदो रंगको सफा कपडा लगाउने गर्नु पर्दछ । यसले तपाईंलाई अरुको अगाडि पहिचान दिलाउने र साथै अरुको मन जित्न मद्दत गर्छ ।
३. सीमित बोल्ने
कोही पनि मानिससँग कुराकानी हुदाँ आफूले जानकारी राख्ने बिषयमा मात्र बोल्नु पर्छ । त्यो पनि आवश्यकताअनुसार मात्र । अन्यथा जुनसुकै विषयमा धेरै बोले वा बोलिरहने मानिसको मूल्य अरुको नजरमा कम हुन्छ । तसर्थ आवश्यकताअुनसार सीमित बोलेमा सहजै अरुको मन जित्न सकिन्छ ।
४. अरुलाई सम्मान दिने
सम्मान सबैका लागि उत्तिकै प्यारो हुन्छ । तर आजकल प्राय मानिस आफ्नो बखान तथा अरुको अपमानमा रमाउने गर्दछन् । यो स्वभावले व्यक्ति स्वयम्लाई खुसी मिले पनि अरुलाई भने यसले नराम्रो चोट पु¥याउँछ । तसर्थ अरुलाई सम्मान दिने व्यक्ति धेरै मानिसको मनमा बस्दछन् । साथै, यस्तो व्यवहारले मानिसको मन जित्न मद््दत समेत गर्दछ ।
५. बनावटी नबन्नुहोस्
मानिस आफूलाई राम्रो देखाउने चक्करमा निकै बनावटी बन्दछन् । उनीहरु आफ्नो क्षमता बाहिरको व्यवहार प्रस्तुत गर्दछन् । तर यसले मानिसलाई आर्कषित गर्दैन । बनावटी बन्दा तत्काल वास्तविकता लुके पनि भविष्यमा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुन्छ । जसले गर्दा तपाईंले अरुलाई प्रभावमा पार्नेभन्दा आफ्नो वास्तविकता लुकाउनतर्फ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।